News - February 2021 XJCSENSOR Multi-axis sensor ọhụrụ ngwaahịa ntọhapụ
Site na February 2021, XJCSENSOR weputara ụdị nke ihe mmetụta dị iche iche dị iche iche iji nyere aka mmepe ụlọ ọrụ 4.0 maka imepụta ọgụgụ isi akpaghị aka. Industrylọ ọrụ 4.0 bụ ịghọta na akpaaka ọgụgụ isi nke ihe ndị sitere n'okike site na mmepe, mkpokọta, na mmepụta n'ime usoro mgbasa. N'etiti ha, ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi bụ onye na-ebu ngwa ngwa n'ichepụta ihe, yana sistemụ njikwa, dịka akụkụ dị mkpa maka ịmepụta smart smart, enweghị ike ịme na-enweghị nkwado nke usoro njikwa ike.
Yabụ kedu ka igbu na njikwa nke njikwa ike si nwee ọgụgụ isi iji nyere aka mmepe nke Ahịa 4.0?
Ka anyị ghọta ụkpụrụ na ngwa nke ọtụtụ axis ike sensọ ：
Multi-axis Sensor bụ ihe akụrụngwa nke dabara na nkwojiaka nke robot iji chọpụta ike na ọwa na-etinye n'ọrụ. Ebe ọ bụ na ọ dị n'etiti robot na ngwá ọrụ ahụ, ọ nwere ike ịgụ ọnọdụ ike n'oge ọrụ nke ngwa ọrụ.
E nwere ike ikewa ngwaahịa XJCSENSOR ọtụtụ axis n'ike n'ike abụọ, ike atọ, na -enwe ike axis, yana nke isi axis ise dịka ọnụ ọgụgụ nke akara a na-atụ atụ.
N'iji ụkpụrụ nke ụdị nje na-eguzogide, ọ nwere uru nke oke ziri ezi, akara ngosi mgbaàmà dị elu, njirimara dị elu dị elu ma dị ala, njigide dị elu, nkwụsi ike siri ike, na nhazi nha dịgasị iche. Sensor esịtidem nwere n'ibu mgbochi bufee imewe, ike mgbochi bufee ike, na ike ga-ike Amplifier, mmepụta mgbaàmà nwere ọtụtụ iche maka nhọrọ.
Site na usoro imepụta usoro pụrụ iche, obere njehie crosstalk, ọkachasị obere crosstalk ogologo oge.
Multi-axis mmetụta ngwa
A na-etinye akụkụ casing nke ihe mmetụta ahụ na nkwojiaka robot. A na-etinye akụkụ na-agagharị agagharị n'akụkụ akụrụngwa. Mgbe etinyere ike na akụrụngwa ahụ, ihe mmetụta ahụ na-agụ ebe dị anya nke akụkụ ahụ na-agagharị agafe site na casing, dabere na njupụta nke ebe a na-ewepụ ya, ihe mmetụta ahụ na-eweghachi akara mgbaàmà na kọmputa.
Ngwa anyị na-ahụ mgbe mgbe na ihe mmetụta bụ bench bench ngwa. Ejikọtara robot na ihe mmetụta na gripper ma na-arụ ụfọdụ ọrụ cyclic na ngwaahịa. Ebe ihe mmetụta ahụ na-etinye aka bụ mgbe a ga-etinye ike a ga-enye na ngwaọrụ. Robot nwere ike itinye ikike pere mpe nke onye mmemme wepụtara yana ọ nwekwara ike nyochaa ike a. Nke a pụtara na a nwalere ngwaahịa a n'ike enyere ya ma enyochaa ike iji hụ ma enwere mgbanwe ọ bụla na omume ngwaahịa a.
XJCSENSOR 6 usoro ihe mmetụta axis
XJCSENSOR isii ihe mmetụta axis na-agbaso ụkpụrụ nke ụdị nje na-eguzogide, nke nwere uru nke isi ike torsional, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, nkenke dị elu, njirimara dị elu dị elu ma dị ala, akara mgbaama dị elu, oke ike, nkwụsi ike siri ike, na iche iche size customization.
Ihe mmetụta dị n'ime ya na imewe mgbochi mgbochi buru ibu, nke nwere ikike mgbochi buru oke ibu. Enwere ike iwuli ya na ampilifaya jikọrọ ọnụ. Ngosipụta mmepụta nwere ụdị dị iche iche maka nhọrọ.
Site na usoro imepụta ụzọ pụrụ iche, njehie crosstalk nke ihe mmetụta dị obere, ọkachasị obere njehie ogologo oge.
XJCSENSOR isii ihe mmetụta axis na-ekewa n'ime ụlọ abụọ dịka usoro ngbanwe: usoro decoupling na matriks decoupling Ọdịdị.
Ọdịdị nhazi usoro: Ihe mmetụta isii nke axis nwere ike ịmepụta usoro ọwa naanị 6, nke bụ ikike atọ (FX, FY, FZ) na ọkụ atọ (MX, MY, MZ), ọwa ọ bụla nwere onwe ya, mgbe otu a na-ebuba ọwa ndị ahụ, naanị ọwa a nwere ihe mgbaàmà, ọwa ndị ọzọ agaghị enwe akara ngosi. Ọmụmaatụ, XJC-6F usoro isii isii axis ike sensọ na decoupling Ọdịdị.
Ihe ngwugwu matrix: Ihe ike ihe ike nke isii na ihe nkpuchi matriks nwere ihe ntinye 6 ~ 12, ihe ngosi obula obula na ibe ya, mgbe ejiri otu uzo di, uzo ndi ozo gha enwe ihe ngosi. ihe mmetụta chọrọ ịnakọta akara Ike atọ (FX, FY, FZ) na ọkụ atọ (MX, MY, MZ) nwere ike nweta site na igbe na-ewepụta ọrụ matrik. Dịka ọmụmaatụ, usoro XJC-6FM niile bụ matrik na-ewepụta ihe mmetụta ike axis isii.
XJCSENSOR 6 axis sensor họrọ nduzi
Họrọ ihe mmetụta kwesịrị ekwesị dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ntụzịaka nhọrọ ọ bụla, biko nye m ihe ndị a
1. Ngwa gburugburu ebe obibi:
Ozi gbasara ma ọ na-emetụta kọntaktị gas ma ọ bụ mmiri mmiri; ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí; arụ ọrụ okpomọkụ; ihe a na-achọghị na mmiri; ike ndọta ma ọ bụ gburugburu nnyonye anya siri ike, ect.
2. Akụkụ na usoro ntinye.
Ngwaahịa a naanị na-enye nha na usoro nke ọtụtụ ngwaahịa. Ọ bụrụ na nhazi na ogo na katalọgụ a erughị ihe achọrọ, biko nye nha ya na usoro ntinye ya. Anyị nwere ike ịhazie ya dịka achọrọ. Ọrụ a na-ahaziri ahazi nke ọsọsọ na ogo dị elu abụghị otu uru dị ukwuu anyị nwere.
3. The n'ezie mmesho nso nke mmetụta
Iji mee ka ihe mmetụta ahụ nwee ike kwụsie ike ruo ogologo oge, anyị na-akwado ka kachasị ọtụtụ ihe na ikike adịghị agafe 80% nke ikike mmetụta.
4. Ihe nha anya ziri ezi
Njehie na-ezighi ezi nke usoro ihe mmetụta isii anyị na-ahụkarị bụ ihe dị n'ime 0,5% FS, njehie a na-emegharị dị n'ime 0. 1% FS, yana njehie crosstalk dị n'ime 3%. A na-ahụ ihe mmetụta sensọ dị elu.
5. Ọdụdọ interface chọrọ
Ihe mmetụta ike isii anyị nwere nwere ụdị analog ma ọ bụ ụdị dijitalụ maka nhọrọ. Mmepụta Analog: mV, V, MA; Mmepụta dijitalụ: EtherCAT, Ethernet, RS232 ma ọ bụ CAN ụgbọ ala, wdg;
Ọ bụrụ na akara ngosi ndị dị n'elu enweghị ike ịchọta ihe ị chọrọ, XJCSENSOR nwekwara ike ịhazi ụzọ mgbaàmà mmepụta ndị ọzọ.